Mudaharad ballaaran oo ka socda Magaalada Gabiley iyo 7 qof oo dhaawac ah |
Mudaharad ballaaran oo ka socda Magaalada Gabiley iyo 7 qof oo dhaawac ah
Mudaharaad balaadhan ayaa la sheegay inuu ka socdo magaaladda Gabiley kaas oo lagaga soo horjeeddo dilkii loo geystay labaddii sarkaal ee lagu dilay magaaladda Qori lugud ee gobolka Togdheer oo mid ka mid ahi ka soo jeedo gobolka Gabiley.
Dadweyne cadhaysan ayaa iskugu soo baxay badhtamaha magaaladda, isla markaana kala xidhay wadooyinkii magaaladda ka baxayey, waxaana wararku sheegayaan in illaa toddoba qof dhaawac yihiin , inkastoo aan illaa hadda si rasmiya loo cadeyn.
Xukuumadda ayaa maanta barqaddii u dirtay magaaladda Gabiley madax ka tirsan dawladda, haseyeeshee mudaharaadku kuma joogsan ee wuu sii laba kacleeyey.
Ciidamada Amniga ayaa Rasaas nool u adeegsaday dadweynihii iskugu soo baxay, waxaanay taasi keentay inay ku dhaawacmaan illaa toddobo qof walina ay socoto mudaharaadku.
Xoghayaha cadaaladda xisbiga Wadani ahna wakiilka u qaabilsan gobolka Gabilay Sheekh Axmed Imaam oo mar dhowayd khadka telefoonka kula hadlay ayaa sheegay in ay ciidanku rasaas xoogan isticmaalayan, isla markaana dadku aanay dibadda u bixi Karin, haseyeeshee ay toddoba dhaawac ahi jiraan.
Axmed Imaam ayaa xukuumadda ugu baaqay inay deganaan badan muujiso, isla markaana aanay dadka shacabka u adeegsan rasaas.
“Sida maqlaysid waxa dhacaya rasaas badan oo ciidanku isticmaalayo, ilaa hadda cid bixi karta ma jirto dadku way cadhaysan yihiin, waxaanu mudaharaadku ka bilaabmay dad ay qaraabo yihiin sarkaalkii ciidanka Militariga ka dhintay, waxayse ahayd in si degan dadka loo joojiyo ee may ahayn in rasaas laga horgeeyo dadweynaha”ayuu yidhi xoghayaha Cadaalada ee xisbiga Wadani Axmed Imaam.
Sheekh Axmed Imaam ayaa xukuumadda ugu baaqay inay dadka sii kicinayso rasaasta nool ee ay u adeegsanayaan, maadaama oo intii ay rasaasta ridiyeen mudaharaadku sii xoogaysayey.
“Maanta barqaddii markii mudaharaadku bilaabmay dad badan may joogin, laakiin intii galinkii damabe ee rasaasta badan loo adeegsaday ayaa keentay inuu mudaharaadku sii balaadho oo dadku ka cadhoodaan rasaasta lagu ridiyo, sidaa darteed waxaan xukuumaddu ugu baaqaya inay shacabka rasaasta ka dayso”ayuu raaciyey hadalkiisa Axmed Imaam oo intii aan waraysiga ku dhex jiray si toos ah u maqlayey rasaas badan oo dhacaysay.
Isbitaalka Gabiley oo aan la xidhiidhay ayaa ii sheegay inuu ku mashquulsan yahay dhaawaca la keenay cisbitaalka, isla markaana aanu ka hor dhici Karin inta dhaawac la keenay maadaama oo wali mudaharaadkii socdo.